iphepha elingenalutho Abakhiqizi nabahlinzeki - China iphepha elingenamaphepha Factory
Iphepha lokusula lenziwe ngezinto ezingalukiwe, ukonga, inhlanzeko, futhi lizinzile ngekhwalithi. Akuthathi isikhala ku-inventory, ine-absorption eqinile, ayilimazi ingaphezulu lento, ayikhiphi i-lint, ayikhiqizi ugesi we-static, futhi ingasetshenziswa ngamakhemikhali awuketshezi nezinye iziphuzo.
Indwangu ye-spunlace nonwoven Multi-purpose yokuhlanza ithawula
Material: Indwangu nonwoven.
Zenziwe ngezinto ezinamandla, ezingena ngokushesha, ezingasetshenziswa ngamanzi noma ngezixazululi.
Amandla amakhulu nokumelana nezinyembezi; ayiwi noma iphuke lapho imanzi, ngisho nasezindaweni ezinzima
Ncibilika kushaywa kwe-PP Hydrophilic Wipes
Yenziwe nge-polypropylene esezingeni eliphakeme, lokhu kusula okuncibilikisiwe okushisayo kuqinile futhi kuphansi. Ukuncibilika kwe-Melt kwenzelwe izindawo ezahlukahlukene izindawo ngaphambi kokuhlanzwa noma kwe-degreasing ngenxa yamandla ayo wokumunca ophelele kawoyela negrisi, cishe izikhathi eziyi-8 zesisindo sayo.